Madaxweyne Trump, oo loo haysto cashuuro uu bixin waayay. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Madaxweyne Trump, oo loo haysto cashuuro uu bixin waayay.
Madaxweyne Trump, oo loo haysto cashuuro uu bixin waayay.
$750 dollar oo keli ah, ayuu cashuur ahaan u bixiyay madaxweynaha Mareykanku sannadihii 2016 iyo 2017-kii . Waxaana arrintaasi ay abuurtay hadal hayn badan iyo in warbaahintu ay qaadaa dhigto mawduucaas.
Wargeyska New Yourk Times oo xogtan daabacay, ayaa sheegay in uu helay macluumaadka iyo diiwaanka canshuurihii uu bixiyay Mr Trump iyo shirkadihiisa 20 sano ee ugu dambeeyay.Waxaana uu wargeysku tilmaamay in canshuurta dakhliga uusan bixin 10 sano oo ka mid ah labaatankaas sano.
Macluumadkan uu daabacay wargeyska New York Times ayaa shaaca ka qaadaya in “muddo sanado ah uu madaxwayanha ka maaganayay bixinta canshuurta”,
Donald Trumpa, ayaa been abuur ku tilmaamay warbixinta uu qoray wargeyska New yorka Times.
Qarax ay ku dhinteen askar katirsan ciidanka dawladda oo ka dhacay shabeellaha Hoose.
CabdiWali Gaas, oo kadigay faragelin uu sheegay in dalal Carbeed ay ku leeyihiin doorashada Soomaaliya.